Kumaandooska Soomaaliya oo sheegtay inay dileen in ka badan 22 Dagaalame oo ka tirsanaa Al-Shabaab | Hadalsame Media
Home Wararka Kumaandooska Soomaaliya oo sheegtay inay dileen in ka badan 22 Dagaalame oo...
Kumaandooska Soomaaliya oo sheegtay inay dileen in ka badan 22 Dagaalame oo ka tirsanaa Al-Shabaab
(Jilib Marka) 16 Maarso 2019 – Howlgalkaan oo xalay sadexdii dhexe ka dhacay deegaanka Jilib Marka ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sida wararku sheegayaan waxaa lala eegtay goobo xarumo u ahaa ururka Al-Shabaab.
Saraakiil u hadlay ciidamada Danab oo ah kuwa si wanaasgan u tababaran islamarkaana aalaaba taageero ka hela diyaaradaha Maraykanka ayaa sheegay in howlgalkii xalay lagu dilay saraakiil ka tirsanaa Al-Shabaab iyo 22 dagaalame.
Saraakiisha ayaa sheegay inay sidoo kale ciidamadu gacanta ku soo dhigeen afar baarbuur oo sida la sheegay qaraxyo lagu raray kuwaas oo la doonayay in lagu fuliyo weeraro kala duwan waa sida ay sheegeen Saraakiisha Danab.
Majiraan wax war ah oo ka soo baxay dhanka Al-Shabaab hase ahaatee weerarada nuucaan ah ayaa ku sii badanayay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxaana si gaar ah loola bartilmaameedsanayay goobaha ururka Al-Shabaab maamulaan.
Previous articleNew Zealand killer scrawled ‘inspiration’ for his shooting spree on his guns
Next articleMadaxwaynaha Jabuuti oo la filayo inuu soo gaaro Muqdisho